IATA: Hamiga cimilada duulista waxay ka tarjumaysaa yoolka Net-Zero ee shirkadaha diyaaradaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » IATA: Hamiga cimilada duulista waxay ka tarjumaysaa yoolka Net-Zero ee shirkadaha diyaaradaha
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Duulimaadyada 77-aad IATA AGM ee Boston, bishii Oktoobar, waxay ku heshiiyeen inay gaaraan qiiqa kaarboon-eber-netka ah marka la gaaro 2050, iyadoo la raacayo fidinta heshiiska Paris ee bartilmaameedka lagu haayo kulaylka caalamiga ah ilaa 1.5 darajo.
Natiijo la taaban karo oo ka soo baxday COP26 ayaa ahayd tallaabadii 23 waddan ay ku saxiixeen Baaqa Hamiga Duulimaadyada Caalamiga ah.
Bayaanka ayaa aqoonsan baahida duulista si ay "si waarta u koraan" waxayna ku celinaysaa doorka ICAO si ay u fuliso yoolalka cimilada dhow, dhexe iyo fog ee warshadaha.
Xaqiijinta waxtarka ugu sarreeya ee Qorshaha dhimista Kaarboonka iyo dhimista Duulimaadyada Caalamiga ah, iyo horumarinta iyo geynta shidaalka duulista waara ujeedooyinka muhiimka ah ee Baaqa.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA)) waxay soo dhaweeyeen ballanqaadyada ku aaddan xoojinta hawlaha cimilada ee lagu sameeyay COP26, waxayna ugu baaqeen dadaallada caalamiga ah ee lagu joojinayo duulimaadyada in lagu taageero siyaasado wax ku ool ah oo dowladeed.
Maareynta ballan-qaadyada cimilada ee duulista caalamiga ah waxay fadhiyaan meel ka baxsan nidaamka COP waana mas'uuliyadda Hay'adda Duulista Rayidka ee Caalamiga ah (ICAO). Si kastaba ha ahaatee, shirkadaha diyaaradaha ee 77aad IATA AGM ee Boston, Oktoobar, waxay ogolaatay in la gaaro qiiqa kaarboon-ka saafiga ah marka la gaaro 2050, iyadoo la raacayo fidinta heshiiska Paris ee lagu beegsanayo kulaylka caalamiga ah ilaa 1.5 darajo.
"Shirkadaha diyaaraduhu waxay ku socdaan dariiqa qiiqa kaarboonka ee eber-ka ah, iyadoo la raacayo heshiiskii Paris. Dhammaanteen waxaan rabnaa xorriyadda aan ugu duulno si waarta. Gaaritaanka qiiqa eber-ka saafiga ah waxay noqon doontaa hawl weyn oo u baahan dadaalka wadajirka ah ee warshadaha iyo taageerada dawladaha. Ballanqaadyada lagu sameeyay COP26 waxay muujinayaan in dowlado badan ay fahmeen furaha horumarka degdega ah inuu yahay dhiirigelinta isbeddelka tignoolajiyada iyo maalgelinta xalal cusub. Tani waxay si gaar ah run u tahay shidaalka waara ee duulista, kaas oo door weyn ka ciyaari doona wax ka qabashada saamaynta deegaanka ee duulista—waxay u baahan yihiin dhiirigelin sax ah oo ka timaada dawladaha si kor loogu qaado wax soo saarka,” ayuu yidhi. Willie Walsh, Agaasimaha Guud ee IATA.
Natiijo la taaban karo oo ka soo baxday COP26 ayaa ahayd tallaabadii 23 waddan ay ku saxiixeen Baaqa Hamiga Duulimaadyada Caalamiga ah. Baaqa ayaa aqoonsan baahida duulista si ay "si waarta ugu koraan" oo ay ku celiyaan ICAODoorka lagu fulinayo yoolalka cimilada ee dhow, dhexe iyo fog ee warshadaha. Xaqiijinta waxtarka ugu sarreeya ee Qorshaha dhimista Kaarboonka iyo dhimista Duulimaadka Caalamiga ah (CORSIA), iyo horumarinta iyo geynta shidaalka duulista waara (SAF) waa ujeeddooyinka muhiimka ah ee Baaqa.
“Waxaan u mahadcelineynaa dowladaha saxiixay Baaqa Hawada Caalamiga ah ee Hawada, waxaana ku boorineynaa dalal badan oo ay ka go’an tahay hindisahan. Qorshaha adag ee dhabta ah ee duullimaadyada eber 2050-ka ee ay ku heshiiyeen shirkadaha diyaaradaha ee xubnaha ka ah ayaa faa'iido weyn u yeelan kara waddamada xubnaha ka ah ICAO si ay u horumariyaan qaab-dhismeedka caalamiga ah iyo yoolka fog ee dhimista kaarboonka duulista," ayuu yiri Walsh.